Barnaamijka musharaxiinta Somaliland Qeybta Labaad
Doorashada Somaliland ka dhacaysa maalinta Isniinta ee foodda innagu soo haysa, ayaa la filayaa inay ka qabsoonto illaa Kun iyo lix boqol iyo laba iyo afartan (1,642) goobood oo ku kala yaalla gobollada Somaliland.
Waxaana doorashada ka hawl-gelaya in ka badan 18,000 oo isugu jira shaqaalaha komishanka iyo hawl-wadeenada goobta codbixinta.
Musharaxiinta ku loollamaya doorashada madaxtinimada ayaa haatan samaynaya ololihii ugu dambeeyey ee ay codbixiyayaasha kula wadaagayaan barnaamijkooda siyaasiga ah, waxana la filayaa in ololaha doorashadu berri soo xidhmo.
Haddaba ku soo dhowaada qayb labaad oo ka mida warbixinno aan ku eegaynay barnaamijyada ay ku ololaynayaan Xisbiyada Somaliland, waxaana noo soo diyaariyay wariyeheena Ismaaciil Xuseen Farjar oo haatan magaalada Hargeysa ku sugan.
Warbixinta Ismaaciil Farjar